Iindaba - I-GERISS Inkqubo yodonga lwebhokisi encinci yedonga, vumela ubuchule obuphezulu ekhitshini!
Ball Ukunikela Ityesi iZilayidi
Hlisa iZilayidi zeDraw
Izilayidi Ukwaleka Powder
Iihenjisi zoMnyango weKhabhinethi
Impompo yeGiya encinci
Iworkshop yeNkampani yethu
I-GERISS inkqubo yodonga lwebhokisi encinci yedonga encinci, vumela ubuchule bakho ekhitshini!
Ngophuhliso lwamaxesha, abantu baneemfuno eziphezulu neziphezulu zeekhabhathi zasekhitshini. Iseti yekhabhathi yekhitshi elungileyo, ihardware yinxalenye ebalulekileyo. I-GERISS HARDWARE ngumenzi waseTshayina owenza izixhobo zekhitshi lekhitshi. Namhlanje siza kuthetha malunga nokuba kutheni kufuneka ukhethe inkqubo yedrowa yebhokisi encinci.
Inkqubo yebhokisi ye-GERISS M02 ye-slim ebhokisini, iipaneli zecala le-drawer zi-13mm ubukhulu, yenza idrowa yakho inendawo enkulu yokugcina. Iipaneli zecala leedrowa onokuzenzela umbala ngokombala owuthandayo. Inkqubo yethu yedrowa encinci ye-M02 Series, iilayidi ezifihliweyo onokukhetha kuzo kufutshane kwaye utyhala ukuvula imisebenzi emibini. Le mveliso inemisebenzi emininzi. Ungasebenzisa islayidi sokujongela phantsi zombini kwiipaneli zecala leedrowa ezincinci okanye kwiidrowa zomthi. Eli nqaku linokukwenza ukuba unciphise uxinzelelo kwii-inventri.
Kwisilayidi esisezantsi sedrowa, ungakhetha iibrakethi zangaphambili ze-2D okanye izixhobo zitshixo zangaphambili ze-3D. Olunye ulwazi ungandwendwela iwebhusayithi yethuhttps://www.yangli-sh.com/drawer-system/ ukukhetha inkqubo yedrowa encinci. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Ixesha Post: Sep-14-2020
Gxila kuphuhliso kunye nokuveliswa kwezinto zefanitshala zefanitshala
Umnxeba: 021-66350149 / 66368006
Idilesi yeNkampani: Igumbi 205, isakhiwo B, 5589 Hutai Road, Baoshan District, Shanghai, China.
Idilesi yomzi-mveliso: Inombolo ye-10 Yonghe Road, indawo yeRenhai yeDolophu, iDolophu yaseIliu, iSixeko saseFoshan, China.